Infographic: 21 Istaatijiyadda Warbaahinta Bulshadda ee u Baahan Yahay Suuqgeeye Walboo 2021 | Martech Zone
Shaki kuma jiro in saameynta warbaahinta bulshada sida kanaalka suuqgeynta ay kordheyso sanad walba. Qaar ka mid ah aaladaha ayaa soo baxa, sida TikTok, qaarna waxay la mid yihiin Facebook, taasoo horseedaysa isbeddel horumar leh oo ku yimaada hab dhaqanka macaamiisha. Si kastaba ha noqotee, sanado badan dadku waxay u barteen astaamaha lagu soo bandhigo warbaahinta bulshada, sidaa darteed suuqleydu waxay u baahan yihiin inay ikhtiraacaan habab cusub si guul looga gaaro kanaalkan.
Taasi waa sababta isha loogu hayo isbeddellada ugu dambeeyay ay muhiim u tahay xirfadle kasta oo suuqgeyn ah. Waxaan ku Waxaad iskaan kartaa go'aansaday inaan kuu fududeeyo hawshan adiga waxaanan kuu diyaariyey macluumaad ku dheehan macluumaad iyo tirakoobyo sida noocyada la doorbido ee ka kooban meheradaha kala duwan, habdhaqanka macaamiisha ee khadka tooska ah, isbarbardhiga kaqeybgalka ee meerayaasha kala duwan.
Tirakoobka Muuqaalka Warbaahinta Bulshada:
Marka la gaaro 2022, 84% dhammaan waxyaabaha ku jira baraha bulshada ayaa lagu soo bandhigi doonaa video.
51% noocyada ayaa horay u jiray adoo adeegsanaya fiidiyowyo halkii laga heli lahaa sawirrada barta Instagram.
34% ragga iyo 32% dumarka ayaa raadinaya fiidiyowyo waxbarasho.
40% dadka isticmaala waxay jeclaan lahaayeen inay inbadan arkaan durdurro summad leh.
52% isticmaalayaashu waxay doorbidaan daawashada 5-6 daqiiqo oo fiidiyow ah hadba madal.
Tirakoobka Mawduuca Warbaahinta Bulshada:
68% dadka isticmaala ayaa hela nuxurka leh caajis iyo rafcaan la'aan.
37% dadka isticmaala baraha bulshada waxay kujiraan quudinta iyagoo raadinaya news. 35% dadka isticmaala ayaa raadinaya madadaalo.
Memes ka sarreysay emoji iyo GIFs caan ah oo hadda ah aaladda isgaarsiinta aasaasiga ah ee khadka tooska ah.
Madadaalada maadadu waa sababta 1aad ee isticmaalka TikTok.
Tirakoobka Macaamiisha Warbaahinta Bulshada iyo Dhageystayaasha:
85%% TikTok isticmaalayaashu sidoo kale way isticmaalaan Facebook, ama 86% ka mid ah Twitter dhagaystayaasha sidoo kale firfircoon on Instagram.
45% adeegsadayaasha adduunka oo idil waxay u badan tahay inay ka raadsadaan magacyada warbaahinta bulshada marka loo eego matoorada search.
87% adeegsadayaashu waxay qirayaan in baraha bulshada ay ka caawisay inay sameyaan a go'aanka iibsiga.
55% dadka isticmaala ayaa leh alaabada si toos ah loo iibsaday baraha bulshada.
Tirakoobka Saameynta Warbaahinta Bulshada:
$ 1.00kiiba wuxuu kubaxay dhismaha xiriirka saameynta celis celis ahaan $ 5.20.
50%% Twitter adeegsadayaashu waligood wax bay soo iibsadeen ka dib markay ku mashquuleen tweet -ka saamaynta.
71% dadka isticmaala ayaa sameeya go'aamada iibsiga iyada oo ku saleysan talooyinka saamaynta ku leh shabakadaha bulshada.
Micro-saameynyahannada wuxuu lahaa heerarka kaqeybgalka ee 17.96% TikTok, 3.86% Instagram, iyo 1.63% YouTube, taasoo abuureysa kaqeybgal badan kuwa Mega-influencers kuwaas oo heley heerarka 4.96% ee TikTok, 1.21% Instagram, iyo 0.37% YouTube.
Istaatistikada Warbaahinta Bulshada:
37% dadka isticmaala TikTok waxay leeyihiin a dakhliga qoyska oo ah $ 100k + sanadkii.
70% dhalinyarada waxay aaminaan YouTubers way daba socdaan, in ka badan kuwa kale ee caanka ah.
6 baxay 10 Isticmaalayaasha YouTube waxay u badan tahay inay raacaan talooyinka vlogger halkii ay ka ahaan lahaayeen marti -geliye TV ama jilaa kasta.
80% dadka xiiseynaya wax soo saar iibsadaan waxaa ka dib markii daawashada dib u eegista on YouTube.
Sanadka 2020, heerka kaqeybgalka Instagram kordhay 6.4%. Isla mar ahaantaana, tirada qoraallada ku jira barta Instagram ayaa hoos u dhacaya: noocyo badan ayaa loo beddelay dhajinta sheekooyin badan.
Ku saabsan YouScan
Waxaad iskaan kartaa waa aalad AI-ku shaqeeya oo ku shaqeeya sirdoonka warbaahinta bulshada oo leh awood aqoonsi muuqaal leh oo warshadeed. Waxaan ka caawinnaa ganacsiyada inay falanqeeyaan fikradaha macaamiisha, inay ogaadaan fikradaha waxqabadka leh, iyo maareynta sumcadda sumcadda.
Tags: 2021CiscoFacebookInstagramsaameyn badanmegainfluencermicro-saameyn-yaresaameyn yarxaqiiqooyinka warbaahinta bulshadawarbaahinta bulshada ee infographictirakoobka warbaahinta bulshadatirakoobka warbaahinta bulshadaTikTokTwitterhubkaa videogaraaciswaanu socail nahayyouscanyoutubeyoutuber
Elena Teselko waa maamule ka kooban Waxaad iskaan kartaa. Waxay leedahay in ka badan shan sano oo khibrad ah xagga suuq-geynta iyo isgaarsiinta, oo ay ku jiraan ka shaqeynta wakaaladda xayeysiinta, shirkadaha IT-ga, iyo warbaahinta.